Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: #OromoRevolution #Beeksisa Hawaasa Oromoo Ardii Awurooppaa keessa jiraattan Maraaf!!
#OromoRevolution #Beeksisa Hawaasa Oromoo Ardii Awurooppaa keessa jiraattan Maraaf!!
Waggaa 1ffaa Fincila didda gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti gaggeeffmaa bahe sababeeffachuudhaan Sadarkaa Ardii Awurooppaatti sagantaan bal’aa fi qabsoo dipilomaasii ol’aanaa qophaa’ee jira. Sadaasa 12,bara 2015 Godina shawaa lixaa aanaa Dandii magaalaa Giinciitti kan eegalame mormii gaaffii mirga abbaa biyyuummaa guutummaa Oromiyaa keessatti odoo wali irraa hin cinne kunoo waggaa tokkoof gaggeeffamaa jira.
Mormii gaaffii mirga Abbaa biyyuummaa uummanni Oromoo gaggeessaa ture waggaa 1ffaa isaa kana sababeeffachuudhaan Koreen Hawaasa Oromoo Awurooppaa fi Aktivistoota Oromoo Sadarkaa Awurooppaatti duula dipilomaasii kan yeroo kami caalaa ol’aanaa ta’e guyyoota lamaaf jechuun sadaasa 9 fi 10,bara 2016 Guyyaa Roobii fi kamisaa qophii bal’aa qopheessanii isiin affeeraniiru.
Qophii kanas kan adda godhu Gootichi Maraatooniii Addunyaa Dorgommii Olompikii Addunyaa irratti dhiitta mirga namoomaa fi yakka sanyii duguuggaa uummata keenya irratti raawwatamaa jiru hawaasa Addunyaatti baasee himuun akka qabsoon Oromoo dhageettii horatu kan godhe Atileet Fayyisaa Leelliisaa yeroo jalqabaatiif gara Awurooppaatti imalaa jira.
Kanaafuu Atileet Fayyisaa Leellisaa fi hooggantoonni Jarmiyaalee Oromoo gara garaa,beektoonnii fi gaggeessitoonni hawaasaa rakkoo saba keenyaa kallattiidhaan Pirezidantii Paarlaamaa Awuroopaa Obbo Martiin Schulzii, Qaamootaa fi qondaaltoota ol’aanoo koomishina Gamtaa Awurooppaa waliin wal arganii dhimma Oromoo fi Oromiyaa akkasumas haala Itoophiyaa irratti ibsa akka kennan qophiin xmuramee jira.
Haaluma kanaan sagantaaleen gaggeeffamuuf karoorfaman ;
* Guyyaa Roobii Sadaasa 09/2016
1-Ganama sa’aa 10:00-12:00 Atileet Fayyisaa Leellisaa Pirezidantii Paarlaamaa Awurooppaa Obbo Martiin Schulzii,Kabinootaa fi Qaamoota Komishina Gamtaa Awurooppaa Ol’aanoo waliin wal arguun dhimma saba keenyaa kan ibsuuf ta’a.
2-Waaree booda sa’aa 14:00 hanga 15:00 tti sagantaa ragaa bahiinsaa/Hearing/ gaggeeffama.
3-Keessuummoonni kabajaa asi irratti Atileet Fayyisaa Leellisaa waliin dubbatuuf affeeraman,Professor Mararaa Guddinaa fi Professor Biraanuu Nagaa ta’uun beekameera.
Kanamalees Sagantaa dhugaa bahiinsa kana irratti bakka bu’oonni Jaarmiyaalee Siyaasaa Oromoo ,Bakka bu’oonni Waldaalee Hawaasa Oromoo Awurooppaa fi hayyoonni Oromoo kan irraa qooda fudhatan ta’a.
Waltajjiin raga bhinsaa kunis kan gaggeeffamu Miseensa Paarlaamaa Awurooppaa Addee Aannaa Goomeezii fi Obbo Garasuu Tufaatiin ta’a.
4-Waaree booda sa’aa 16:00 irraa eegalee hanga halkan walkkaatti sagantaa Marii Uummataa fi yaadannoo gootowwaan Wareegamtoota keenyaa bal’inaan kan gaggeeffamu ta’a.Hubachiisa sagantaa kana irratti hawaasni Oromoo Awurooppaa keessa jiraatu hundi kan haalli mijatuuf marti argamuun hirmaachuu ni danda’a.Atileet Fayyisaa Leellisaa ,Prof.Mararaa Guddinaa fi hoggantoonni Jaarmiyaalee siyaasaa fi hawaasaa kana irratti haasa’an ni taasisu.
*Guyyaa Kamisa Sadaasa 10/2016
1- Ganama 10;00-11;00 tti Fayyisaan ibsa gazexessitoota biyyoota alaaf kenna/Press conference/
2- Waggaa 1ffaa yaadannoo gootowwan keenya Mirga abbaa biyyuummaa isaanii kabachisuuf jecha komootaan wareegamanii ilaalchisuun hiriirri mormii guddaan Fuullee Paarlaamaa Awurooppaatti sa’aa 11:00 hanga sa’aa 14;00 tti Hawaasa Awurooppaa hundi bakka irra qooda fudhataniitti ni gaggeeffama.
Hubachiisa:Bakka qophiiwwan guyyoota lamaaf itti gaggeeffamuuf karoorfaman Biyya Beljiyeem,Magaalaa Brussel ;Parlaamaa Awurooppaa fi naannoo san keessa ta’uun beekameera.Bakka galmaa fi hiriiraa karaa waldaalee Hawaasoota keessanii kan isiin beeksifnu ta’a. Qabsoon itti fufa,haqa qabna,ni injifanna!!
Koree Qindeessituu Sagantichaa.
Posted by Hasan Ismail at 3:43 AM